Maalinta: Juun 8, 2018
Kursiga ugu horeeya waxa lagu dhejiyaa Sekapark-Beach Yolu Tram Line
Khadadka Sekapark-Plajyolu, oo loogu talagalay Kocaeli Metropolitan Municipal iyo waliba khadka tareenka Akçaray, ayaa si xawli ah u socda. Aaladaha ay muwaadiniintu si joogto ah u adeegsadaan, Akçaray ayaa ku adeegi doonta wado dheer kadib qadka Sekapark-Plajyolu. [More ...]
Xarunta Baska ee Harran
Dowladda Hoose ee Magaalada, oo wax badan ku maalgelisa degmada horumarinta Harran, oo door muhiim ah ku leh dalxiiska adduunka, waxay hadda siineysaa degmo cusub bas bas casri ah. Munaasabadda xarig-goosadku waxay ka dhacday Harran Metropolitan [More ...]
Degmada majaajilada, oo furay xarunteedii korantada ee korontada ka hor qashinka maalintii hore oo leh munaasabad ammaan ah, iyo 75. Dhismaha xariiqa tareenka ee u socon doona Yil iyo Sultandere Neighborhoods ayaa bilaabay. [More ...]
Barnaamijka Iftar oo uu soo abaabulay Kayseri Ulasim AS oo loogu talagalay shaqaalaheeda ayaa ka dhacay Miiska Wonderland iyada oo ay ka qeyb galayaan ku dhowaad shaqaalaha 700. barnaamijka; Waaxda Qorsheynta Gaadiidka iyo Nidaamka Tareenka ee Degmadda Kayseri ee Magaalada Ferhat Bingöl, Gaadiidka Kayseri [More ...]
Aasaaska dhismaha garoonka diyaaradaha ee Gaziantep oo leh awood sannadle ah oo gaadheysa 5 milyan oo rakaab ah ayaa 10-ka Juun la dhigi doonaa xaflad ay ka soo qeyb galeen Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan. Dhismaha garoonka diyaaradaha Gaziantep iyo duulimaad [More ...]
ELBÜS'ler ayaa ka muuqday Elazig
Boqolkiiba boqol basaska korantada guryaha, kuwaas oo u adeegi doona raaxo, xawaare iyo heerar tayo sare leh ee gaadiidka dadweynaha ee magaalada, ayaa lagu muujiyey degmada Elazığ, oo la kulantay xubnaha saxaafadda si ay u dardar geliso ELBÜS [More ...]
Dhibaatada Tansaaniya ee Tansaaniya, 10 Dhimasho 26 Dhaawacmay
Tansaaniya dhexdeeda, dadka 10 ayaa la diley halka 26 qofna ay ku dhaawacmeen shilkaas oo ka dhashay isku dhacii tareenka xamuulka iyo baska oo maraya heer goynaya. Tareenka xamuulka iyo baska ee Kigoma, Tansaaniya [More ...]
Altepe oo ku dhawaaqay Sababta Sababta Meelmarin Meelo Lagu Helay Terminal Bus Bus
Recep Altepe, oo ku wareejiyay xilka madaxweynenimada degmada Bursa Metropolitan, ayaa caddeeyay sababta ay u kari waayaan inay tareen tareennada ka dhigaan Istanbul Street. Serkan kanNCEOĞLU wararka ka soo baxa Bursa news waa sida soo socota; Markii loo yeedhay, wuxuu ku nuuxnuuxsaday inaanu la jabinnin degmadii iyo siyaasaddii iyo [More ...]
Laga soo bilaabo Madaxwaynaha Uysal ilaa Gaadiidka Metro
Duqa Magaalada Caasimadda Istanbul Mevl Met Uysal ayaa booqashooyin isdaba joog ah ku tagay Gaziosmanpaşa maanta. Madaxweynaha Uysal, Gaziosmanpaşa Warshadaha Ganacsatada Warshadaha ee Warshadaha (GOPSİAD) 'wuxuu la hadlay dadka ganacsatada ah. Ilk Kulankii ugu horreeyay ee aan qabtay markii aan xafiiska qabtay waxay ahayd magaalo. [More ...]
20 Bin Eve Electric oo ka timid Metrobus Wind
Magaalooyinka waaweyni waxay soo saaraan koronto iyagoo wata rakaabka Marawaxadaha qabanaya dabaysha ay sameeyeen gawaaridu inta lagu guda jiro kala guurka, nidaamka metrobus, oo astaan ​​u noqday Istanbul, ayaa siin doona tamar ku filan degmo, iyo sidoo kale gaadiid rakaab ah. [More ...]
Jawaabtii Teleferic ee Taageerada Alanyasporlu ee Warbaahinta Bulshada
Taageerayaasha Aytemiz Alanyasporlu, 'Teleferik Alanyaspor'a 1 TL' weli ma aysan fulin ballan qaadkii warbaahinta bulshada ay kaga falcelisay. Aytemiz Alanyaspor'a sanadkii hore '1 TL balanqaad ka yimid gaariga korontada, inkasta oo la fuliyay mashruuca bisha 9 [More ...]